3GP in DVD Converter: Sida loo Guba 3GP in DVD on Mac / Windows
> Resource > DVD > 3GP DVD: Sida loo Guba 3GP in DVD ee Mac / Windows
Helay 3GP files aad smartphone cunista ilaa meelaha aad kaydinta? My soo jeedinaya waa in ay iyaga wareejiyo computer iyo gubi in DVD in ay sii daayaan boos lacag la'aan ah ee aad taleefan. Actuallly, waxa kale oo fikrad weyn loo ilaalin xusuusta ee sanadaha soo socda, ciyaaro video on TV iyo soo dir qoyska iyo saaxiibada fog si ay u daawadaan.
Si aad u gubi 3GP in DVD ee Mac OS X (libaax buurta, Libaaxa ka mid ah) si fiican u, waxaan u Khushuucdo Dartiis this xirfad Mac codsiga talinaynaa - DVD Creator for Mac , oo gubi karaa 3GP in DVD ee Mac aan ka kaaftoomi, marka lagu daro oo dhan ah qaabab video oo caan ah. Haddaba bal fiiriya sida loo sameeyo waa talaabo talaabo ah.
Talaabooyinka Easy in ay Guba 3GP in DVD ee Mac OS X (Mountain Libaaxa ka mid ah)
Waa fud si ay u gudbiyaan files 3GP si Mac. Sida caadiga ah, kaliya aad u baahan in lagu xiro aad casriga ah ama qalab kale oo aad makiinad. Oo weliba waxaad ka heli doontaa drive laga saari. Waxaad markaa shaqeyn karaan faylasha on drive sida faylasha iyo fayl caadiga ah.
Talaabada 1: Import 3GP files si gubi DVD Mac (libaax buurta mid)
Marka hore, la abuuro mashruuc cusub shaashadda soo dhaweynayaa in ay gubi 3GP in DVD. Si aad ku dari files 3GP in app Mac 3GP DVD ku gubanaya, aad si toos ah u soo jiidi kartaa files si ay barnaamijka, ama guji "+" button in kooxda uu gacanta midig. Waxa kale oo aad ku milmaan karo laba ama in ka badan 3GP video files mid u ciyaaro 3GP videos si joogto ah.
Talaabada 2: Edit 3GP files (Ikhtiyaar)
Ka dib marka aad soo dhoofsadaan files 3GP in DVD Creator for Mac ah (Mountain Libaaxa, Libaaxa ka mid ah), oo aad xaalkaa kartaa videos by falinjeeerka qaybaha aan loo baahnayn iyo doorashada ka qayb ugu fiican ee wax gubaya. Waxa kale oo aad Spice kartaa videos by codsanaya saamaynta video ka mid ah. Plus, si aad videos shakhsiga, waxaad samayn kartaa DVD menu horyalka Talyaaniga, ku dar horyaal iyo music soo jeeda.
Tallaabo 3: Ka billow 3GP in DVD badalidda ee Mac
Ugu dambayn, riix badhanka Gubashada ee koonaha midig si ay u gubaan 3GP in DVD la Mac ee DVD gubi. Geedi socodka gubanaya qaato muddo ah oo ku xiran ee files 3GP. Waxaa Waxaad tegi karo tan 3GP in DVD Mac abuure in la sameeyo inta ka dhiman aad u. Fadhiiso oo naso. Marka ay dhamaystiran, waxaad ku raaxeysan kartaa videos markiiba TV. Ku raaxeyso!
Waa maxay 3GP
3GP u taagan yahay 3-Generation Partnership Project. Waa qaab weel multimedia oo xoojisay u telefoonada gacanta. Files 3GP keydin karaa durdurrada video sida MPEG-4, H.263, iyo H.264. 3G2 waa qaab la mid ah video in 3GP, taas oo ay diyaariyeen 3aad Generation Partnership Project 2 (3GPP2) oo loogu talagalay adeegyada multimedia 3G CDMA2000. 3GP iyo 3G2 Labada waxaa taageera Wondershare DVD Creator for Mac iyo Windows. Haddaba DVD Creator for Mac (Mountain Libaaxa, Libaaxa taageeray) si ay u gubaan 3GP in DVD ee Mac inay ku raaxaystaan ​​on TV si degdeg ah.
Pal in NTSC Converter: Sida loo badalo Pal in NTSC
Top 10 DVD fiican ee lagu barto Gitaarka
Sida loo Copy DVDs on OS X Mavericks